Fiainam-pirenena : taona 2016, mbola ho be ierehana ny mpitondra | NewsMada
Fiainam-pirenena : taona 2016, mbola ho be ierehana ny mpitondra
Taona 2016. Mby ao an-tsaina ny fanatanterahana ny fivoriana an-tampony faha-16 hataon’ny Vondron-tany mampiasa ampahany na manontolo ny teny frantsay na ny Frankôfônia eto Madagasikara, ny 15-20 novambra 2016. Hanao ahoana?
Misy ny manahy ny mety tsy hahatanteraka sy hahatomombana izany, na maniry ny tsy hanaovana azy eto Madagasikara aza. Mila mazava ny amin’ireo Nosy malagasy manodidina, mbola eo an-tanan’ny fanjakana frantsay ny fitantanana azy.
Tsy mazava na tsy hazavaina rahateo izay tena hevitra sy ataon’ny fanjakana malagasy ny amin’ireo Nosy malagasy manodidina. Izay no fototry ny tsy fitovian-kevitra, ahina na inian’ny sasany havadika ho zavatra hafa.
Hibahan-toerana ny fifandraisana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ity taona 2016 ity? Eo koa ny fandraisana ny fivoriana an-tampon’ny Comesa, tsy fantatry ny maro amin’ny maha lafiny varotra aty Afrika azy.
Zava-dehibe koa ny eto an-toerana
Heverina ho tafajoro amin’izay ireo andrimpanjakana rehetra amin’izao Repoblika IV izao. Tombanana hiara-dalana amin’ny fijoroan’ny Antenimierandoholona ny fananganana ireo andrimpanjakana hafa: ny Fitsarana avo (HCJ), ohatra.
Eo koa ny amin’ny Filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna, ny Filankevitra ara-toekarena sy sosialy ary kolontsaina. Samy voalazan’ny lalàmpanorenana ireo.
Nihazakazahana ny fifidianana kaominaly sy ny loholona, tamin’ny taon-dasa. Tsy ho latsak’izany ny fifidianana ireo lehibe sy mpanolotsaina eny anivon’ny faritra sy ny faritany, efa tsy voasolo tena tamin’ny fifidianana loholona.
Aiza ho aiza amin’izany ny fanatsarana mivantana ny fiainam-bahoaka? Tsy vitan’ny famoahana didy aman-dalàna na fandaharanasa io, na fanaovana fitsidihana sy kabary matetika… Mitaky asa mivaingana amin’izay.
Sao very na hadino amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny raharaham-panjakana ny fiainam-bahoaka, izay tena antony nifidianan’ny vahoaka ny mpitondra? Mbola ho be ierehana… Mba ho taom-piotazana ny 2016.